AOI waa nidaam aad u muhiim ah oo QC ah oo lagu hubinayo tayada iibinta SMT.
Fumax waxay si adag gacanta ugu haysaa AOI. DHAMMAAN 100% looxyada waxaa hubiya mashiinka AOI ee khadka Fumax SMT.
AOI, oo leh magac buuxa oo ah Iskuduwaha Aaladda Iswada, waa aalad aan u isticmaalno inaan ku ogaanno looxyada wareegga ah ee aan siinno macaamiisha tayo sare leh.
Maaddaama ay tahay tikniyoolajiyad tijaabo ah oo soo ifbaxaysa, AOI waxay inta badan ogaataa cilladaha guud ee lagala kulmo iibinta iyo kororka iyadoo lagu saleynayo farsamaynta farsamaynta muuqaalka xawaaraha sare iyo saxsanaanta. Shaqada mashiinka ayaa ah in si toos ah loo baaro PCB-ga kamaradda, la ururiyo sawirrada lana barbardhigo xuduudaha keydka xogta. Ka dib markii la farsameeyo sawirka, waxay calaamadeyn doontaa cilladaha la hubiyey oo lagu soo bandhigi doonaa qalabka lagu hagaajiyo gacanta.
Maxaa lagu ogaadaa?
1. Goorma la isticmaalaa AOI?
Adeegsiga hore ee AOI ayaa ka fogaan kara u dirida guddiyada xun heerarka isku imaatinka xiga, iyadoo lagu gaarayo hanaan wanaagsan oo lagu xakameeyo. Kuwaas oo yareeya qarashka dayactirka, iskana ilaaliya xoqidda golayaasha wareegga ee aan dayactirka lahayn.
Kala-saaridda AOI oo ah tallaabada ugu dambeysa, waxaan ka heli karnay dhammaan khaladaadka isku imaatinka sida daabacaadda dhejiska dhejiska, meelaynta qaybaha, iyo dib-u-habeynta dib-u-hagaajinta, oo bixisa heer sare oo nabadgelyo ah.
2. Maxaa lagu ogaadaa?
Waxaa jira saddex cabir ahaan inta badan:
Kormeeraha ayaa u sheegi doona shaqaalaha dayactirka haddii guddigu sax yahay calaamadeeyana meesha lagu hagaajinayo.
3. Maxaan u dooranay AOI?
Marka la barbardhigo kormeerka muuqaalka, AOI waxay hagaajineysaa ogaanshaha qaladka, gaar ahaan kuwa PCB-ga ka sii adag iyo mugga wax soo saar ee waaweyn.
1 location Goobta saxda ah: Waxay u yartahay 01005.
Cost 2 cost Qiimo jaban: Si loo hagaajiyo heerka gudbitaanka PCB.
3 objects Waxyaabaha baaritaanka badan: Oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn wareegga gaaban, wareegga jaban, iibiyaha aan ku filnayn, iwm.
Lighting 4 lighting Nalalka barnaamijka ah: Kordhi yaraanshaha muuqaalka.
（5 software Barnaamijka softiweerka ee karti u leh: Xog ururin iyo dib u soo helid qoraal, muuqaal, xog ururin ama qaab isku dhafan oo dhowr ah.
6 feedback Jawaab celin wax ku ool ah: Sida tixraaca loogu talagalay wax ka beddelka halbeegga ka hor soo-saarka soo socda ama kulanka.
4. Farqiga u dhexeeya ICT & AOI?
T 1） ICT waxay ku tiirsan tahay astaamaha korantada ee qaybaha elektaroonigga ah ee wareegga si loo hubiyo. Astaamaha jireed ee qaybaha elektarooniga ah iyo guddiga wareegga waxaa lagu ogaadaa waqtiga dhabta ah, danab, iyo inta jeer ee mowjadda.
O 2） AOI waa aalad ogaata cilladaha guud ee ka soo baxa wax soo saarka la iibiyo iyadoo lagu saleynayo mabda'a indhaha. Sawirada muuqaalka ee qaybaha guddiga wareegga ayaa si indha indheyn ah loo baarayaa Wareeg gaaban waa la xukumaa.
5. Awoodda: 3 nooc
Isku soo wada duuboo, AOI waxay eegi kartaa tayada looxyada ka soo baxaya dhamaadka khadka wax soo saarka. Waxay ka ciyaareysaa kaalin wax ku ool ah oo sax ah kormeerka qaybaha elektarooniga ah iyo PCB si loo hubiyo in alaabooyinka ay yihiin kuwo tayo sare leh iyadoon saameyn ku yeelan khadka wax soo saarka iyo cilladaha wax soo saarka PCB.